Ixesha kunye nabahlobo 28
Ngaba thina okanye asikho emanyeni kunye ne-atma-buddhi?
Asinjalo. Umbuzo ubanzi kwaye ungacacanga, kwaye uthatha kancinane ukuba sizazi zonke izinto ezisekwe kuzo. Ezi zinto zi-atma kunye ne-buddhi apho u "si" okanye "engekho manyano". Umbuzo ngokucacileyo ubuzwa ngokombono we-theosophical. I-Atma kuthiwa ngumoya wokuqonda ogcwele zonke izinto. I-Buddhi kuthiwa ngumphefumlo wokomoya, imoto ye-atma, kunye ne-atma esebenza ngayo. “Si” kuthiwa ziingqondo ezizazi ngabantu. "Umanyano" ngumbuso apho omnye okanye ngaphezulu zidityaniswe kunye okanye zidityaniswa kunye. I-Atma umoya owazi wonke jikelele kwaye i-buddhi isithuthi sayo, imanyene ngamaxesha onke; kuba basebenza ngokudibeneyo ngamaxesha onke kwaye i-buddhi iyayazi i-atma kwaye bobabini badibene. Banokutsho ke ukuba baManyaniswe nguwonke wonke onokwazi. Kwesinye ukuba simanyene ne-atma-buddhi, kufuneka ndazi njengoko nam kwaye kufuneka ndazi ukuba ngubani na njengam; Kumele ukuba babazi ubuntu bayo kunye nokuba bayaziwa kwaye kufuneka babenolwazi nge-bumba kunye ne-atma, kwaye kufuneka bazi ukuba njengabantu abahlangeneyo, kunye, kunye, nobunye be-buddhi ne-atma. Xa umntu endisaziyo ukuba ungubani kwaye ndiyazi ukuba ikunye ne-atma eyaziwa jikelele kunye ne-buddhi ke loo mntu unokuthi ngokufanelekileyo ukuba "umanyene ne-atma kunye ne-buddhi." umntu ngamnye malunga nokuba yeyiphi i-atma kunye ne-buddhi kwaye siyintoni, kwaye yintoni imanyano, kuba loo mntu uya kwazi kwaye ulwazi luza kuphelisa ukuqikelela. Kwimeko yangoku yomntu, "thina" asazi ukuba singoobani. Ukuba asazi ukuba ngubani "thina", asazi ukuba ngubani okanye ngubani i-buddies kunye ne-atma; kwaye ukuba asizazi ukuba singoobani kwaye asizazi zonke izinto, asizizo izidalwa ezizibonayo zimanyene nemithetho-siseko esekeleweyo ye-atma kunye ne-buddhi. Umanyano kukusondeleleni, kwaye kuloo nqwelomoya uqaphela unxibelelwano lwento emanyeneyo. Umntu oziqapheleyo akanakutsho ngokuqinisekileyo ukuba ubumbene okanye umanyene nayo nantoni na angayaziyo ngokupheleleyo, nangona loo nto inokubakho kuye. I-Atma kunye ne-buddhi zibakhona nomntu ngalo lonke ixesha kodwa umntu nje ngokuba eyazi into ayazi okanye angazi i-atma kunye ne-buddhi njengemithetho yendawo yonke neyokomoya. Kungenxa yokuba akazimiselanga nto kwaye ngenxa yokuba engabazi abakhe, ngenxa yoko, yena, mfo, njengengcinga yokuba akamanyani ne-atma-buddhi.
Ngaba akuyinyaniso ukuba konke esinakho ukukwenza kuba kusele kuthi kwaye konke okufuneka siyenze kukuziqonda?
Ngokwesiqhelo, kuyinyani, kwaye, konke ekufuneka sikwenzile kukukhumbula konke okukuthi. Oku kwanele okwangoku. Ke, mhlawumbi, kuya kufuneka sazi yonke into engaphandle kwethu kwaye ke siyawubona umahluko phakathi kwento nako konke okukuthi.
Umbuzo njengenkcazo uyathandeka kwaye kulula njengomoya ovuthuzayo ehlotyeni-kwaye awunasiphelo. Ukuba umntu uza kuyanelisa ngombuzo onjalo kunye nempendulo engu-"ewe" okanye impendulo engengombuzo, kuya kubakho isibonelelo esincinci esivela njengokuya kwi-economisturist eyenze imixholo yeengcinga ukuba igcinwe endaweni yakhe bopha yonke imbewu yazo zonke izinto ezikhulayo. Umntu owaziyo okanye okholelwayo ukuba unayo yonke into eyenzekayo ukuba abe yiyo okanye ayazi ngayo, kwaye ongayenziyo into eyaziyo, umbi ngakumbi kwaye unovelwano kunalowo ungazinzanga ngeziphakamiso ezingafunekiyo kodwa ozama ukuphucula imeko yakhe yangoku yomzimba. Kumazwe aseMpuma kuqhelekile ukuva abantu bephinda-phinda ngeelwimi zabo: “NdinguThixo”! “NdinguThixo”! “NdinguThixo”! ngesiqinisekiso elula kunye nokuzithemba. Kodwa ngaba kunjalo? Ngokwesiqhelo aba bantu bangathi bangoThixo izithixo ezitalatweni kwaye bazi okuncinci ngokwaneleyo ukuba benze intetho; okanye banokufunda kakhulu kwaye bakwazi ukungena kwiimpikiswano ezinde bexhasa ibango labo. Kodwa bambalwa kwabo benza ibango abanika ubungqina ebomini babo kunye nomsebenzi abawuqondayo nabanelungelo kuwo. Singenise ezi ziqinisekiso kunye neendidi ezahlukeneyo zaba bantu banikezela kwaye sisafumana iimpahla ezintsha eMelika. Kodwa ukuba bangoothixo, ngubani ofuna ukuba kuthixo?
Kulungile ukuba umntu akholelwe ukuba zonke izinto zinokwenzeka kuye; kodwa luhanahaniso kuye ukuzama ukuzenza akholelwe ukuba sele elifikile ilizwe elinokuthi libe likude. Umchiza ekwilabhoratri yakhe, umzobi kwiseyile yakhe, umnyibilikisi kwimarble yakhe, okanye umlimi emasimini akhe, unobuthixo-ngakumbi kunabo bahambahamba ngokungxama nangokuthe tye kwaye bengqina ukuba bathixo, kuba ubuThixo bungaphakathi zona. Kuthiwa: "Ndiyimiccosm ye-macrocosm." Kuyinyani kwaye kulungile. Kodwa kungcono ukwenza into kunokuyithetha.
Ukwazi okanye ukukholelwa into linyathelo lokuqala lokulufikelela. Kodwa ukukholelwa entweni asikuko nokuba yinto okholwayo. Xa sikholelwa ukuba yonke into esinokuba yiyo ingaphakathi kuthi, siyayazi kuphela inkolelo yethu. Oko kukungazi izinto zethu. Siya kuzazi izinto esikholelwa ngazo ngokuzama ukuziqonda nangokusebenza kuzo. Ukukhokelwa sisizathu sethu nangokomsebenzi wethu siya kuzazi izinto ezingaphakathi kuthi kwaye sifikelele ekufezekisweni kweenjongo zethu. Ngomsebenzi wakhe ikhemistri ibangela ukuba ibe yile nto ayisebenzelayo ngokwefomula. Umdwebi wenza kubonakale okona kulungileyo engqondweni yakhe. Umkroli ubangela ukuba umfanekiso ngqondweni wakhe ubonakale kwimarble. Umlimi ubangela ukuba zikhule ezo zinto zazinokubakho kuphela kwimbewu. Umntu unazo zonke izinto ngaphakathi kuye yingcinga yobuThixo. Le ngcinga yimbewu enokubakho yobuThixo. Le ngcinga yobuThixo isetyenziswa gwenxa, igculelwe kwaye ichaphazeleke xa ibhalwe malunga nokukhanya. Xa ibethwa kancinci yimilomo engakhange igqume, njengembewu evuthuzwe kumhlaba owomileyo, ayizukuthatha ngcambu. Umntu owaziyo ukubaluleka kunye neminqweno yokuhlakulela imbewu ayiyi kuyivelisa, kodwa uya kuyibeka kumhlaba ofanelekileyo kwaye uya kuyikhulisa kwaye ayikhathalele loo nto ikhula ngaphandle kwembewu. Umntu osoloko esithi ungumntu wobuThixo, ukuba uyi-miccosm ye-macrocosm, ukuba uyi-Mithra, i-Brahm, okanye omnye uMntu osemthethweni, uveza kwaye abhubhise imbewu anayo kwaye akufanelanga ukuba ngomnye imbewu yobuThixo iya kumila ingcambu ikhule. Lowo uziva ngathi uyinqanawa kaNowa eqinisekileyo kwaye uziva ukuba ungcwele ngaphakathi, unengcwele kwaye uyayondla ingcinga. Ngokuhlakulela kwaye aphucule iingcinga zakhe kwaye enze ngokungqinelana nenkolelo yakhe, unikezela ngemeko apho ubukrelekrele nobuThixo bukhula ngokwendalo. Uya kwandula ke athi ngokuthe ngcembe azi ukuba zonke izinto zingaphakathi kuye nokuba ngokuthe ngcembe uziva zonke izinto.